Ra’iisul Wasaare Cabdiweli oo Shacabka iyo Xukuumadda Puntland ugu hanbalyeyeey Sannadguurada 16-aad
Muqdisho, August, 02, 2014.... Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya Mudane Cabdiwali Sheikh Axmed Maxamed ayaa hanbalyo ku aaddan sannadguuradii 16aad ee ka soo wareegtay asaaskii Puntland u diray shacabka iyo xukuumadda Puntland. Mudane Cabdiweli ayaa shacabka Soomaaliyeed ee reer Puntland u rajeeyey horumar iyo nabad waarta, isagoo sheegay in 1-daA ugust ay shacabka Puntland iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed tusayso sida bulsho isu tagtay ay u dhisi karaan nidaam dowladeed oo shaqaynaya, iyagoo ku dheggan midnimada Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay in Puntland ay horseed ka tahay Dowlad Soomalaiyed oo mid ah oo ku dhisan nidaamka Federaalka, waxana uu xusuusiyey shacabka Puntland in ay mar walba ka sii shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka dalka si loo gaaro dhammaan himilooyinka ummadda Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli oo ka hadlayey munaasibadda 1-da August waxa uu yiri:
“ Waxaan shacabka iyo Xukuumadda Puntland oo ugu horreeyo Madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ugu hanbalyeynayaa munaasibadda 1-da August oo ku aaddan sannadguuradii 16-aad ee markii la dhisay Maamulkaasi. Dadka reer Puntland waa dad nabad jecel, waxaana ku aamanayaa horumarka dhan kasta ah oo ay sameeyeen mudadii ay jirtay Puntland.
“Waxaa wax lagu faano ah sida dimuqraadiyada ku jirto oo maamulka Puntland ku soo dhaqmayey 16 sano ee la soo dhaafay, waxaa xusid mudan doorashadii ugu danbaysay oo runtii muujinaysay bisaylka dimuqraadiyadeed ee ka hanaqaaday Puntland”
Agaasimaha Warfaafinta Xafiiska Ra’iisul Wasaarha